अन्य उडान सिमुलेटर
उडान गियर उडान सिम्युलेटर
FlightGear उडान सिम्युलेटर खुले-स्रोत, फ्रीवेयर को FlightGear परियोजना विकास सिम्युलेटर छ। पहिलो रिलिज 1997 थियो, र हालसम्म विज्ञप्ति धेरै थियो।
फ्रीवेयर हुनुको बावजुद FGFS एक धेरै राम्रो र व्यावहारिक सिम्युलेटर छ। सिम्युलेटर यो आत्म साथ, यो सम्बन्धित अरू सबै कुरा डाउनलोड गर्न, प्रयोग र थप विकास पनि निःशुल्क छ। डाउनलोड गर्न वा तपाईँले यसको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले यसलाई आधिकारिक FlightGear वेब साइट मा गर्न सक्छन्, www.flightgear.org .
विभिन्न विमान डाउनलोड गर्न मुख्य स्थान, तिनीहरूलाई को 400 भन्दा बढी छ, यहाँ: github.com/FGMEMBERS .
यो राम्रो कुरा के तपाईं चाहनुहुन्छ विमान डाउनलोड गर्न दर्ता छैन भन्ने छ।
दृश्यहरु, दुई तरिकामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ वेब साइट वा सिम्युलेटर भित्र TerraSync सिस्टम प्रयोग गरेर। साथै, आफ्नो पीसी शक्ति आधारमा, तपाईं पूर्वनिर्धारित र HD दृश्यहरु बीच चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
FlightGear पनि यसलाई आफ्नै बहु नेटवर्क छ, तर दुर्भाग्य कुनै सक्रिय भर्चुअल एयरलाइन्स र VATSIM वा IVAO जस्तै ठूलो सांसद सञ्जालका लागि कुनै समर्थन।